January 2020 – Sonic Generation
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိရင်း သူပြောတာကို သဘောကျမိတယ်။
သူက ပြောတယ်။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
စာဖတ်ဖို့ ဘာကြောင့် အရေးကြီးလဲ
နည်းပညာထွန်းကားလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ စာဖတ်ဖို့ မလိုတော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့ သူအချို့ ရှိတယ်။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဘာအတွက် ကြိုးစားနေတာလဲ???—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
အောင်မြင်ဖို့အတွက် ရူးသွပ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား
မပြည့်စုံခြင်းဟာ အလှတရား တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ရူးသွပ်ခြင်းဟာလည်း ထူးချွန်မှု တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ သာမန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ပျင်းရိဖွယ်ရာ အလုပ်တွေ လုပ်တာထက် ထူးခြားတာက ပိုကောင်းပါတယ်”—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ငွေစုဖို့ လိုလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးမေးရင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် အရင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ကျန်းမာခြင်းဟာ လာဘ်ကြီးတစ်ပါး” ဆိုတဲ့ စကားကို လူတိုင်း သိတယ်။
ဒါပေမယ့် လူတိုင်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါရဲ့လား???—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ကျွန်တော် နှစ်သက်မိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ဝေမျှပါရစေ။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
တစ်ရက်မှာ ၂၄ နာရီ ရှိတယ်။
မင်းအနေနဲ့ တစ်ရက်ကို ၆ နာရီ အိပ်ရင် ၁၈နာရီ ကျန်မယ်။
အချို့သူတွေက တစ်နေ့ကို ၈နာရီ ကနေ ၁၀ နာရီ အထိ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။
ခင်ဗျားမှာ နောက်ထပ် ၈ နာရီ ကျန်သေးတယ် ဆိုပါစို့။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
လီယိုနာဒိုရဲ့ ဘဝအောင်မြင်ရေး နည်းလမ်းများ
တိုက်တန်းနစ်ရုပ်ရှင်ကားက စလို့ ကမ္ဘာ့ပရိသတ်ရဲ့ နှလုံးသားထဲ အခိုင်အမာနေရာယူထားတဲ့ မင်းသားချော လီယိုနာဒိုဆိုရင် မသိသူ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် အောင်မြင်ဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲတဲ့အတွက် သူ့မှာ ပြောင်မြောက်တဲ့ အောင်မြင်ရေးနည်းလမ်းတွေ ရှိမယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ သူပြောခဲ့တဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင် အောင်မြင်ရေးနည်းလမ်းတွေကို ကြည့်ကြရအောင်။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားရဲ့ ဘဝနေနည်း အကြံပြုချက်များ
ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားဟာ တိဗက်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဉီးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က လူအများရဲ့ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို ခံရသူတစ်ဉီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။—အသေးစိပ် ဖတ်ရှု့လိုပါက ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ ဝင်ရောက် ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်—
Total Website Visits: 306670